သြော် နား နား နား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သြော် နား နား နား
သြော် နား နား နား
Posted by တောင်ပေါ်သား on Mar 11, 2014 in Creative Writing, Short Story | 22 comments
အမေ့ချော့သိပ်သံကို ဘာနဲ့ ကြားခဲ့ရတာလဲ ?
သိပ်ကိုသာယာတဲ့ သူ့အသံလေးကို ဘာနဲ့ ကြားခဲ့ရတာလဲ ?
အဖေကြီး မုန့်ဘိုးပေး ဆိုတဲ့အသံကို ဘာနဲ့ ကြားခဲ့ရတာလဲ ?
ဟောဒီ နားကြီးနဲ့ပေါ့  ၊
အခုတော့ နားယားလို့ ကလိရင်း အနာဖြစ်ရာက
အတော်ကြီးကို မကြားရတဲ့ဘဝ ရောက်ခဲ့ရပြီ ၊
အနာက အတော်ကိုက်လာလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က နား နှာခေါင်း လည်ချောင်းဆေးရုံကြီးကို သွားခဲ့ပါတယ် ၊
ပြင်ပလူနာဌာနမှာ ၂၀၀ နဲ့ လူနာမှတ်တမ်းစာအုပ်လုပ်ပြီး အဲဒီနေရာမှာပဲ စာအုပ်ထပ်ထားရပါတယ် ၊
ကိုယ့်အရင်ရောက်နေသူက ၅၀ ကျော်လောက်မို့ အတော်စောင့်ရဦးမှာပဲ လို့တွေးမိပါတယ် ၊
ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်တွေ ရှိနေတဲ့ ဘယ် ညာ စမ်းသပ်ခန်း ၂ ခန်းမှာ တစ်ခါခေါ် ၁၀ ယောက် ( တစ်ခန်းကို ၅ ယောက်နှုန်း ) မို့
တစ်နာရီ မကြာလိုက်ပဲ ဆရာဝန်ဆီ ရောက်ခဲ့ပါတယ် ၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ဆေးတစ်ပါတ်စာပေးပါတယ် ၊
နားထဲထည့်ဖို့လည်း ဘယ်ဘက်အတွက် တစ်မျိုး ညာဘက်အတွက် တစ်မျိုးပါ ၊
ကျနော့်ဘယ်ဘက်နားက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက နားပြည်ယို အနာဖြစ် အဲသလိုနဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့
နောက်တော့ မကြားရသလောက်ဖြစ်သွားပါတယ် ၊
ဒီတော့ ညာဘက်နား တစ်ဘက်တည်း အားကိုးနဲ့ နေခဲ့ရာက အခု ညာဘက်နားက ဖြစ်လာတာပါ ၊
( ဘယ်ဘက်က မကြားရလို့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောရင် သူ့ကို ကိုယ့်ညာဘက်ဖြစ်အောင်ထားမှ သေသေချာချာ ကြားရတာပါ ၊
ရုံးက အစည်းအဝေးဆိုရင် ကျနော်က အမ်ဒီရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ ရွေးထိုင်ပါတယ် ၊ သူ့အသံက တိုးသမို့ပါ ၊ )
အဲဒီ ဆေးရုံက ဆေးဆိုင်မှာ ဆေးတစ်မျိုးပဲ ဝယ်ရပါတယ် ၊ ပန်းရောင်လေး ညဘက်သောက်ဖို့တဲ့ ၊ ၇ လုံးကို ၈၄၀ ပါ ၊
အခု တစ်ပါတ်ပြည့်ပါတော့မယ် ၊ ကောင်းကောင်း မကြားရသေးပါဘူး ၊
နားထဲမှာ တစ်ခုခုဆို့နေသလိုပါပဲ ၊ ဖုန်းတောင် လက်တစ်ကမ်းသာသာဆို ရင်းတုန်းသံ သိပ်မကြားရလို့ အင်္ကျီအိပ်ကပ်ထဲ ထည့်ထားရပါတယ် ၊
ဘာသံမှ မကြားရလို့ နားအေးသားဟ လို့ ရယ်စရာတွေးမိပေမယ့် ခေါ်မကြား အော်မကြားဘဝတော့ မရောက်လိုတာမို့
မနက်ဖြန် ဆေးရုံပြန်သွားပါဦးမယ် ၊
ခွဲမှဖြစ်မယ်ဆိုလည်း ခွဲရတော့မှာပေါ့ ၊
သြော် နား နား နား ၊
ဝတ္ထုလား တကယ့် အဖြစ်လားဟင်. . .
အမယ်လေး ၊ တကယ်ဖြစ်နေတာပါဗျာ ၊
အဲလာ တယ်လီဖုန်းတွေ မတရားသဖြင့် ပြောလို့နေမှာ။
ဆရာဝန်မဟုတ်တော့ ဘယ်လို အကြံပေးရမှန်းမသိ ။
အဲတော့ သိတာ ပြောနိုင်တာ တစ်ခုဘဲ ရှိတယ် ။
ကျေးဇူးပါ ကေဇီ နဲ့ ကထူးဆန်းရေ ၊
ကေဇီရေ ၊ ဖုန်းက တစ်နေ့နေလို့ ၃ ၊ ၄ ခါပဲ ၊
ဒါတောင် ရုံး ရယ် အိမ်ရယ်က များများ ၊ ပြောလည်း ၂ မိနစ် ၃ မိနစ်ပဲ ၊
ကျူစရာလည်း မရှိရပါဘူးကွယ် ၊
ဘာ ကြောင့် ဖြစ် တာ လဲ သိ နေ သလို
နား ကို ခဏ ခဏ $%^*%&&(*( အ ကျင့် ခံ ရ လို့ နေ မှာ
အွန် တွေ့ရင်လည်း စကားလေး ဘာလေး ပြောချင်သေးတယ်လေဗျာ ၊
အသံလေးလည်း ကြားချင်သေးသပေါ့ ၊
အခု ဈေးဝယ်ရတာကို အဆင်မပြေချင် ၊
ဈေးသည်က ဘယ်လောက်ဈေး လို့ ပြန်ပြောတာကို သဲသဲကွဲကွဲ မကြားရတော့
ငါးရာဘိုး တစ်ထောင်ဘိုး အဲသလို ဝယ်နေရတာ ၊ ဆိုးချက်
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုမိုက်ရေ ၊
အခုမှ ဈေးဝယ်ရခက် ၊ စကားပြောရခက် ၊ ဒုက္ခကို ဖက်ထားရသလိုပဲ ၊
ကိုယ်မတတ်တော့လည်း ဆရာဝန်ပဲ အားကိုးရဦးမှာပေါ့ဗျာ ၊
နားထဲ တစ်ခုခုထိုးရတာမျိုးတွေ မလုပ်နဲ့အုံး အစက်ချနားဆေး နဲ့ နားသန့်ဆေးရည် မျိုးသုံးသင့်တဲ့ အချိန်ပါ။
နားကို လက်ဝါးလေးနဲ့ခဏပိတ်ကြည့် ဝှီ ဝှီ ဝှီ လို့ နားအူဆူသံဆက်တိုက်မကြားရဘူးဆို နားစည်အခြေအနေကောင်းနေလို့ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ အဲ တစ်ခုတော့ သတိထာရလိမ့်မယ် နားအတွင်းအနာကြောင့်နာနေတာမျိုးဖြစ်ရင် ဖြစ်နိုင်ပြန်တာမို့ လိုရမယ်ရညော်တော့ရှောင်ဗျ
နားကိုထိတောင် မထိရဲတော့ဘူး ၊
ပြန်ကောင်းမယ်လို့ ယုံကြည်ပေမယ့် လောလောဆယ် ခံရချက် မသက်သာဘူးဗျာ ၊
နား မျက်​​စေ့ နှာ​ခေါင်းက ဂရုစိုက်​နိုင်​မှဗျ ငယ်​တုန်းက ဖ​ယောင်းတိုင်​ လက်​သန်း​လောက်​နဲ့ စာဖတ်​တဲ့ကျွန်​​တော်​ အသက်​​လေးဆယ်​​ကျော်​နဲ့ မျက်​မှန်းတပ်​​နေရတယ်​ တစ်​ခုခု ဖတ်​ချင်​ရင်​ လူကြားထဲလဲ မရှက်​နိုင်​ဘူး အိပ်​ကပ်​ထဲကမျက်​မှန်​ထုတ်​ရတာပဲ အဆင်​​ပြေပါ​စေဗျာ
ကြည့်ရတာ အပြင်နားမှာ အနာဖြစ်တာ ဖြစ်မယ်။
ပိုးသတ်ဆေးတွေ သောက်/ထည့်ရင် ကောင်းသွားမှာပါ။ နောက် ကို နားထဲ ရေမ၀င်စေနဲ့၊မကလိနဲ့။
(နားကို လိမ်မဆွဲစေနဲ့……..ဘယ်သူကလဲတော့ မပြောတော့ပါဘူး)
အခု ဆေးစား ဆေးထည့်နေပါတယ် ၊
အဲ . . အဲ . . . ဒါနဲ့ အာတီဒုံရေ
နားကိုဘယ်သူက လာလိမ်ဆွဲမှာလဲဟင် ၊
အဲသလို လိမ်ဆွဲမယ့်သူ ရှိချင်လိုက်တာ ၊
ကိုမျိုးသန့်ရေ…ကျွန်တော်လဲ အဲ့လို ဖြစ်နေတာဗျ…ဘယ်ဘက်နားက လုံးဝ တိုးတိုးလေး ကြားရတယ်…ညာဘက်နားကတော့ ပုံမှန်ပဲ…ဆရာဝန်ပေါင်းလဲ စုံနေပြီ…ဘယ်ဘက်နားကို ကပ်ပြီးလာပြောရင် ညာဘက်နားထိုးထိုးပေးနေရတယ်…ဘယ်တုန်းက ဖြစ်တာမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး…ဆရာဝန်သွားပြတော့လဲ ကြားနေရသားပဲတဲ့…ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါတဲ့…အာရုံကြောကြောင့် ဖြစ်တာဆိုပြီး နူရိုဘီယံပဲ သောက်ခိုင်းတယ်…ဘ၀တူတွေဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဗျာ…ပျောက်ရင် ဘယ်လိုပျောက်သွားတယ်ဆိုတာ ဝေမျှပြီး ရေးပေးပါဦး…
အင်း… ဒုက္ခ ၊ ဒုက္ခ
ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတွေ အမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းပါစေချင်….
သေချာဂရုစိုက်ပါကိုမျိုးသန့်ရေ။ တဖက်ထဲကျန်တဲ့နား ဂရုစိုက်ပါလေ